Abavelisi beBhokisi abaSebenzisa iiModyuli abaXhasi kunye nabaXhasi - China Umatshini wokuhambisa ibhokisi yemodyuli yaseChina
EZIIMODYULI zeplastiki engenanto Kuba MCB IP40 (TXM series) isiseko seplastiki
Uyilo lwepaneli iyonke intofontofo kwaye inomtsalane, imibala egqume ubuso iluhlaza okomhlaza kunye ne-brawn (ebonelelwe ngokweemfuno zombala woyilo lwangaphakathi lweendawo zokuhlala ngaphandle kwemibala esemgangathweni). Uyilo lobuso obugqumeyo linika imvakalelo entle kunye nenhle. Umtsalane weNdlovu, ukomelela okuphezulu, ungaze utshintshe umbala. Izinto ezibonakalayo nguPC. Isakhelo esisigxina, isakhiwo esilula, kunye nokufakwa okulula.
EZIIMODYULI zeplastiki engenanto kuba MCB IP40 (TXM series) Iron Base
I-SHPN Series Ibhokisi yokuhambisa amanzi
Ibhokisi yokuhambisa ephezulu, uyilo lwepaneli iyonke iyinto enomtsalane eyomileyo. Izinto eziphathekayo yi-PC eyenza ukuba ikhuseleke ngokwenene, ikhusele umlilo kwaye ikhusele i-UV. Isakhelo esisigxina, isakhiwo esilula, kwaye kulula ukuyifaka.Isebenza ngokukodwa kwindawo engenamanzi, ubungqina bokuba uthuli kunye neendawo ezinobungqina bokubola.I-IEC60529 EN 60309 IP65.
Ukuvalelwa okungenanto kwePlastikhi kwi-MCB IP65 (HT Series) Ibhokisi yokuhambisa ubungqina boManzi
Ibhokisi yokukhanyisa ye-HT Series iyahambelana ne-IEC-493-1 esemgangathweni, inomdla kwaye ihlala ixesha elide, ikhuselekile kwaye ithembekile, esetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezahlukeneyo ezinje ngomzi-mveliso, indawo yokuhlala, indawo yokuhlala, iziko lokubamba njalo njalo.
Ukuvalelwa kweMCB (uthotho lwe-HAG)
I-HAG uthotho lwebhokisi yomphezulu luhlobo lwenkangeleko entle entle, kulula ukuyifaka ibhokisi yokuhanjiswa kweemodyuli.Izisebenzisa ikakhulu ukwakha inkqubo yokuhambisa umbane, ifaniswe kunye nokwakhiwa kwendlu yokwakha njl njl.
Iimodyuli zokuhanjiswa kweemodyuli (BE uthotho)
Isigqubuthelo sijijwe kabini kwaye siyilelwe ngumbethe, ulula kwaye ubonakala umhle.